पश्चगामी हुनबाट जोगियोस् शिक्षक महासंघ | Aaja ko Shiksha
पश्चगामी हुनबाट जोगियोस् शिक्षक महासंघ
२०७६ असोज १५ गते
नेपाल शिक्षक महासंघले २३ बुँदे घोषणा जारी गर्दै भर्खरै आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय परिषद् सम्पन्न गरेको छ । प्रमुख शिक्षक संगठन घटकबीच विवाद र असहमतिबीच घम्साघम्सी चलेपनि अन्ततः सहमतिमै टुंगिएको महासंघको परिषद्ले गरेको निर्णयहरुले देशको राष्ट्रिय जीवनमा निश्चय पनि दूरगामी प्रभाव पार्छ नै । महासंघले शिक्षकहरुको पेशागत आवाज र हकहितका निम्ति पैरवी गर्नु स्वाभाविकै हो । तर, केही अस्वाभाविक माग गर्नुचाहिँ चिन्ताको विषय भएको छ । जस्तै, शिक्षकको सेवा अवधि ६० बाट बढाएर ६३ वर्षको हुनुपर्ने माग गर्नु त्यो अस्वाभाविक मात्र होइन कि अग्रगामी नभई निकै पश्चगामी लाग्छ । प्रचलित कानूनअनुसार ६० वर्ष भएपछि सरकारी सेवाबाट व्यक्तिले अवकाश पाउँछ । अझ, शिक्षण पेशामा जति उमेर बढ्दै जान्छ, व्यक्ति शिक्षण सिकाइमा थकित बन्दै जान्छ र ऊ अद्यावधिक पनि हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासमा त ४५ कटेका शिक्षकहरु क्रमशः गोल्डेन ह्याण्डसेक हुने प्रचलन छ । यहाँ त जागिरलाई लम्ब्याउने माग शुरु भएको छ जुन पेशागत आवाजका दृष्टिले पनि जायज मान्न सकिँदैन ।
शिक्षक महासंघ झण्डै तीन लाख शिक्षकहरुको प्रतिनिधि संस्था भएको दाबी गरिरहन्छ । यति ठूलो संगठनले यो खालको मागमा जिकिर गर्ने हो भने के गुणस्तरीय पढाइलाई सिकाइमा बदल्न उमेर ढल्किएका हजुरबा/हजुरआमाहरुकै भर पर्नुपर्ने हो ? के त्यो अबका दिनमा सम्भव होला र ? बरु, ४५ वर्षबाटै अद्यावधिक हुन नसक्ने शिक्षकलाई स्वैच्छिक अवकाशका लागि प्रेरणा दिनु त कता–कता महासंघ सेवा अवधि बढा भन्दैछ । ४५ वर्षे अद्यावधिक नियम ल्याउन सक्ने हो भने त युवाले अवसर पाउने थिए । र, नयाँ युगअनुसारको शिक्षण सिकाइमा उनीहरु सक्रिय हुनेथिए । बालबालिकाको सिकाइ र उपलब्धिलाई शिक्षक महासंघले अब पनि केन्द्रमा नराख्ने हो भने शिक्षकहरु केवल आफ्नै पेशाका निम्ति बोलिरहन्छन् भन्ने आरोप सत्यमै बदलिन सक्छ ।
अतः ६३ वर्षे पश्चगामी प्रावधानका लागि महासंघ दौडनु किमार्थ उचित हुन्न । नेपालीको औषत आयुका कारणले मात्र होइन, विश्व मापनमा पनि ६० वर्षे सेवा अवधि एउटा साझा मापदण्ड बन्दै आएको छ । त्यसो त, नेपालीको औषत आयु बढेको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षकको सेवा अवधि बढाउनु पर्छ पनि भनिएला, त्यो कदापि तर्क र न्यायसंगत हुँदैन । यसले त बालबालिकाका शैक्षिक भविष्य थप जोखिमपूर्ण हुनेछ । झन् पश्चगामी हुनेछ । त्यसैले, महासंघका शिक्षक नेताहरुले बेलैमा पश्चगामी हुनबाट आफूलाई जोगाउनु जरुरी छ ।